ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भने, 'म अनसन बसेँ भने तपाईं राजीनामा दिनुहुन्छ?'
डा.गोविन्द केसीको अनसन र उनका माग बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डा. केसीका सबै माग पुरा गर्न नसकिने बताएका छन्।
बैठकमा उपस्थित एक नेताले ओलीलाई उद्धृत गर्दै सेतोपाटीलाई बताए,'कसैले अनसन बस्दैमा नाजायज माग पुरा गर्न सकिन्न। संसदको सार्वभौम अधिकार कसैले अनसन बसेर खोस्न सक्दैन।'
ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले डा.केसीको माग सम्बोधन गर्न धारा १२ र १३ उनको माग अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने आशयको धारणा राखेपछि ओलीले यसको प्रतिवाद गर्दै भने,'म अनसन बसेँ भने तपाईं राजीनामा दिनुहुन्छ?'
एमाले अध्यक्ष ओलीले यो विधेयक आफ्नै पालामा सरकारमा दर्ता गरेको भएपनि त्यतिबेला हतारमा, सम्झौतास्वरूप विधेयक तयार गरिएको बताए। 'पछि संसदले मिलाउँछ भनेर हामीले विधेयक हतारमा तयार पार्‍यौं,' ओलीलाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, 'अहिले त्यहाँ भएका सबैकुरा मान्नुपर्छ भन्ने छैन।'
मनमोहन चिकित्साविज्ञान प्रतिष्ठान सरकारले किनेर डा.केसीको माग अनुरूप विधेयक पारित गरौं भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावमा ओलीले भने,'कसैको सम्पत्ति जबरजस्ती बेच्न लाउन पाइन्छ, कि हामी महेन्द्रको पालामा जस्तो राष्ट्रियकरण गर्दै हिड्ने हो?'
बैठकमा केपी ओलीले के भन्नुभएको हो भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा नेता खरेलले भने,'कसले के भन्यो भन्नेतिर नजाऊँ। बैठकको सार भनेको संसदको सार्वभौमिकतामा कसैले हस्तक्षेप मिल्दैन त्यसैले, डा.केसीले अनसन तोडेर संसदीय समितिलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने हो।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २०, २०७४, ०९:१२:१८